TALATA VOHIMENA : Dahalo iray maty, sarona ny basy kalachnikov iray, tafaverina ny omby
Nisy trangana fifandonana mahery vaika tamin’ny dahalo ihany koa tao Ambatolahindravahy, Kaominina Talata-Vohimena, distrikan’i Manandriana, Faritanin’i Fianarantsoa teo aloha, Faritra Amoron’i Mania, ny harivan’ny 13 oktobra 2019 lasa teo. 15 octobre 2019
Araka ny tatitra voaray dia manodidina ny 30 eo ny andrimasom-pokonolona antsoina hoe : “Zazamainty” niandry kizo tao amin’io toerana voalaza io. Vokany, dahalo iray no lavo, basy mahery vaika Kalachnikov (type FAC) iray koa no azo. Tafaverina avokoa ny omby 35 nangalarin’ny dahalo izay nahavelom-bolo tanteraka ny fokonolona. Raha tsiahivina dia efa ho efa-bolana eo ho eo izao no nanaovana fanentanana ny fokonolona tao amin’ity kaominina ity mba handray anjara mavitrika amin’ny paikady atao hoe "Auto-défense villageoise" na fiarovantenan’ny tantsaha, ka anisany fanatanterahana izany ny fiandrasan’ny Vondrona "Zazamainty" ireo kizo tena atahorana indrindra.
Efa tranga maro no nambenan’ireo Zazamainty tao an-toerana raha ny fanazavana voaray ary hita fa nahomby tokoa ny paikady entin’izy ireo miady amin’ny asan-dahalo. Toy ny trangana halatr’omby tao Soatono, fokontany Sahamandresy, Kaominina Talata-Vohimena, ny alin’ny 09 oktobra 2019 ka lasa tamin’ izany ny omby miisa 35. Rehefa nambenan’ireo Zazamainty ny kizo rehetra tamin’izay fotoana izay dia tao Ambatolahindravahy no lalan’ireo tsy mataho-tody, ka raikitra teo indray ny fifandonana raha mbola tsy voampandre ny mpitandro fialaminana. Nahitam-bokany betsaka ny fanentanana natao tamin’ny fiarovan-tenan’ireo tao an-tanàna sy ny manodidina mba hiara-hientana ary nankasitraka ireo "Zazamainty" ny fokonolona noho ny fahafoizan-tenan’izy ireo. Misokatra moa ny fanadihadiana momba ilay basy tratra hatreto.